Warka - Gargaarka Aafada ee Gargaarka Musiibada
Bogga ugu weyn/In The News
Dhaqdhaqaaqa isu gurmashada inta lagu jiro musiibooyinka maahan wax aan allifnay. Laakiin waxaan isku dayeynaa inaan u dhaqano sidii mindi ciidan swiss ah dhaqdhaqaaqan sii kordhaya, maadaama ay aad iyo aad muhiim ugu sii ahaanayso jiritaankeena wadareed Hal dariiq oo aan ku taageereyno kuna kobcineyno xeeladdan, iyo dhaqdhaqaaqa ballaaran ee gargaarka musiibada, oo aan qeyb yar ka nahay, ayaa daweynaya keydka maqaallada wararka ee ku saabsan ismaamulka, xorriyadda, dadaallada wadaagga ah ee masiibooyinka.
Falanqee qaybta All Qarax Bambaano (2019) Daadad Dhiig (2013) Coronavirus (2019-2021) Dhul gariir Haiti (2010) Mawjada Kulaylka (2021) Duufaan Dorian (2019) Duufaanta Florence (2018) Duufaanta Hanna (2020) Duufaanta Harvey (2017) Hurricane Ida (2021) Duufaanta Irma (2017) Duufaanta Katrina (2005) Duufaanta Laura (2020) Duufaan Maria (2017) Duufaanta Michael (2018) Duufaanta Sally (2020) Duufaannada Eta / Iota (2020) Kentucky Tornado (2021) Louisiana Tornado (2021) Dhul gariirka Mexico (2017) Daadadka Michigan (2021) Dhaqdhaqaaqa Nolosha Madoow Oklahoma Tornado (2013) Dhulgariirkii Puerto Rico (2020) Awoodda Sandy (2012) Tennessee Tornadoes (2020) Dabka Duurjoogta ee Xeebta Galbeed (2017-2018) Dabka Duurjoogta ee Xeebta Galbeed (2020) Duufaan Jiilaal Uri (2021)
Kooxaha Caawinta Labada Dhinac ee Seattle waxay isku dayaan inay Deris la'aan ku noolaadaan Barafka
"Ma ahan inaan noqono kuwa sidaan sameynaya."
Farshaxanka Caawinta Labada Dhinac -Arkitecture - e-flux
Ubaxyada - Ma waxaad tahay robot?
Kooxaha gargaarka wadaaga ah ayaa bixiya caawimo gaar ah ka dib Hurricane Ida
Hurricane Ida ka dib, shabakadaha gargaarka wadaagga ah ayaa ku soo biiray ficil si ay u kabaan adeegyada gargaarka ee la aasaasay ee dawladda dhexe iyo dawladaha hoose, iyo samafalka
Talaajadaha bulshadu wali ma kaydsan yihiin?
Sidee buu u eg yahay mustaqbalka kaalmada wadaagga ah marka aan " baraneyno inaan la noolaanno" COVID?
Whiskey Bayou Waxay Martigalisaa Gawaadhida Cunnada ee New Orleans, Makhaayadaha Quudiya Deriska Carabta
Kooxda wadaniga ah ee gargaarka wadaagga ah Imagine Water Works waxay ku biireen ciidamada baarka Arabi si ay sahay, cunto, iyo saaxiib u siiyaan dhibanayaasha duufaanta.
'Waxay naga illoobeen uun': hudheel Maraykan ah oo qaxoontiga cimilada ah oo aan lahayn meel ay aadaan - sawir-qaade
Ku dhawaad ​​sanad ka hor, dab ayaa kor u qaaday noloshooda. Hadda dadka deggan Oregon waxay isu arkaan inay ku dheggan yihiin limbo
Louisiana: Masiibooyinka Horizon
Anaga oo sawiranayna waraysiyo lala yeeshay anarchists maxaliga ah, waxaanu sahaminaynaa xididada gumaysiga ee masiibooyinka socda ee Hurricane Ida ayaa uga sii daray Louisiana waxaanan ka hadlaynaa sida bulshooyinku u abuuri karaan kaabayaal adkeysi dhab ah u leh dhammaan.
Maxaad Ka Ogaataa Hantiwadaaga Musiibada
Warshadaha gaarka loo leeyahay ayaa inta badan ka faa'iidaysta xasaradaha si ay macaash u rogaan.
Shabakadaha gargaarka wadaagga ah ayaa isu keenaya agabka si ay u taageeraan kuwa aadka ugu baahan New Orleans ka dib Hurricane Ida.
Kaalmada labada dhinac waxay beddelaysaa habka aan isu caawinno
Caawimada labada dhinac kuma salaysna wax bixinta hal qof oo dheeraad ah, laakiin ku celcelinta midnimada bulshada dhexdeeda.
Mutual Aid Mutual Mutual Aid Muxuu Samayn Karaa Markay Musiibo Dhacdo?
"Qof aan garanayay ma jirin, [wuxuu saadaalinayay] masiibo fayrus ah, laakiin waxaan diyaar u nahay inaan uga falcelinno masiibada siyaalo aysan dadka badankiisu ahayn," ayuu yiri mid ka mid ah qabanqaabiyeyaasha.
Iyadoo laydhku maqan yahay: Wadahadal lala yeelanayo Lobelia Commons oo ku saabsan Caawinta Labada Dhinac, Isbeddelka Cimilada, iyo Duufaanta
Maxaa ku dhacaya nalalka bakhtiyay oo dukaamada ilaalada booliisku ay ka buuxaan cunto? Shabakadeenu diyaar ma u noqon doonaan inaan nafteena ilaalino? Ma awoodi karnaa inaan caawino deriskayaga ama aan iska ilaalino nafteena? karaa...
Gargaarka wadajirka ah, agabka bulshada ee Kentuckians ee ay saameeyeen duufaanada
Liistada soo socota ee jawaab celinta waxaa soo qabanqaabiyay Kentucky Civic Engagement Table iyo Hood to the Holler. Ilahaan waxaa laga yaabaa in la cusboonaysiiyo marka ay dhibaatadu soo baxdo. Halkan ku dhufo liiska UGU CUSBOONAYSIINTAY Che…
Dhaqdhaqaaqa Sunrise wuxuu leeyahay U yeer Burburka Tornado Waa maxay: "Musiibo Cimilo"
Sunrise waxa ay carabka ku dhufatay in ficil cimilo oo xaaqan, oo ay ku jirto gudbinta Xeerka Dib-u-dhiska Wanaagsan, ay lama huraan tahay.
Caawinta labada dhinac ee Bulshooyinka Shaqaalaha Soogalootiga ah ee California
'Xalka dhabta ah ee arrimaha xididka': Ka dhigista soo kabashada duufaantu mid sinnaan ah
Lix bilood ka dib Ida, aasaasaha Shabakadda Soo-kabashada Kaliya ee Louisiana ayaa ka tarjumaysa dadaalka kooxda ee lagu dayactirayo guryaha iyo tababarida shaqaalaha.
Duuliyihii Canshuurta Gaaska Weerar lagu Qaaday Gargaarka Labada Dhinac ee Shaqada
Canshuurta Gaaska ee Guurtida/Duuliye VMT oo lagu daray biilka kaabayaasha ayaa dhaawacaysa shaqaalaha socdaalka, darawallada baabuurta korontada iyo kooxaha Gargaarka Mutual sida MIMAC.
Fanaaniinta Portland waxay ka hadlaan dadaalkooda gargaarka hirarka kulaylka, aragtida dadweynaha
Waxaa qoray MELISSA “CLAUDIO” LEWIS Bishii Juun 27 -keedii, Portland waxay jebinaysay diiwaannada kulaylka, iyadoo koox anarchists ah iyo kuwo kale oo bidix ah ay alaab u rarayeen xero hoylaawe ah. “Waan ku garanayay gu…
Brooklyn, NY: War -murtiyeed ka soo baxay Wadajirkii Jimicsiga ee Baxsashada NYPD ee Hubka Gargaarka
Warbixin ka socota The Gym, oo ah shabakad gargaar wadaag ah oo ku taal Brooklyn, New York, kuna saabsan dib -u -soo -noqoshada hanti bannaan oo loo isticmaalo sidii xarun gargaar wadaag ah iyo ka -saaristii dambe ee NYPD.